merolagani - लगानी सम्मेलनले जुटायो साढे १४ खर्ब बराबरको लगानी प्रतिबद्धता
लगानी सम्मेलनले जुटायो साढे १४ खर्ब बराबरको लगानी प्रतिबद्धता
Mar 03, 2017 merolagani
२५ बर्षपछि राजधानीमा आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा साढे १४ खर्ब बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । दुई दिने सम्मेलनमा सहभागी डेढ दर्जन विदेशी लगानीकर्ता बाट १३ अर्ब ५२ करोड अमेरिकन डलर लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको हो। जबकी सरकारले एक खर्ब लगानी जुटाउने अपेक्षा राखेको थियो ।
सम्मेलनमा सहभागी भएका झण्डै अढाई सय लगानीकर्तामध्ये १६ लगानी कर्ताले १३ अर्ब ५२ करोड डलर लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
जसमध्ये चीनबाट ८.३ बिलियन डलर अर्थात् ८ खर्ब ३० अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको लगानीको प्रतिवद्धता भएको छ । त्यसैगरी बंगलादेशबाट २.४ बिलियन डलर अर्थात २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिवद्धता भएको छ ।
लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने अर्को देश श्रीलंकाबाट ५० करोड डलर अर्थात् ५० अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिवद्धता आएको छ । छिमेकी देश भारतबाट भने जम्मा ३१ करोड ७० लाख डलर अर्थात ३१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लगानीको प्रंतिवद्धता आएको छ ।
सम्मेलनमा नेपाली लगानीकर्ताहरुको तर्फबाट समेत ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
दोस्रो बजारमै पाईन थाल्यो आइपिओकै भाउमा शेयर, यी हुन् सस्ता कम्पनी
निरन्तर शेयरबजार ओरालो लाग्दा अधिकांस कम्पनीहरुको सेयरमूल्य सस्तिएको छ । बजार घट्दै जादा दर्जर्नौ कम्पनीको शेयरमूल्य आइपिओकै हारहारीमा झरेको छ ।नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयरमूल्य आइपिओ भन्दा पनि कम मूल्यमा झरेको छ ।
एनएमबि बैंकको एफपिओमा संस्थागत लगानीकर्ताले कति गरे आवेदन ?
एफपिओ र दोस्रो बजारमा सेयरमूल्य उस्तै भएपछि अलमलमा लगानीकर्ता
राधी विद्युत कम्पनीको सेयरमूल्य समायोजन
प्रमोटरले नकिनेको नेको इन्स्योरेन्सको संस्थापक सेयर सर्वसाधारणले किन्लान् ?
आइएमई लाईफले आईपिओ निष्काशनको प्रकृया अघि बढायो, बिक्री प्रबन्धक छनौट